Tag: atụmanya | Martech Zone
Anyị na-na-e bipụtara nnọọ a bit banyere ngwá ọrụ ndị na-kwe ka ahịa na ahịa mgbalị. N'uche m, ndị nnọchi anya ire ahịa nwere ọrụ siri ike karị na-arụ n'oge a. 59% nke oge ha na-arụ ọrụ ndị ọzọ karịa ire ere dịka nyocha akaụntụ na ịdepụta ndu. Ndị ahịa na azụmaahịa nwere ike ịme nyocha pụrụ iche n'ịntanetị, nyochaa atụmatụ, uru, ngwaahịa, ọrụ, ogo na nyocha. N'agbanyeghi otutu ihe ahia di, 40% nke ahia
Saturday, December 20, 2008 Sunday, May 29, 2016 Douglas Karr
Enwere ihe dị iche n’etiti onye na-ere ahịa na onye ọ kacha nso. Ekwenyere m na m bụ nnukwu onye na-ere ahịa, mana ọ dị nso. Amaara m na erere m ọtụtụ nkwekọrịta dị ukwuu, mana ọbụghị m nwoke ahụ na-agbanye ink (nkwekọrịta nkwekọrịta). Enweghị m mmasị ịlaghachi azụ na nkwekọrịta nkwekọrịta ma ọ bụ itinye nrụgide maka atụmanya ịbanye na mbụ. Obi dị m ụtọ na ndị ọrụ m gbara m gburugburu na-eme m obi ụtọ. Ndị na-emechi anyị nwere ike